राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १९५ जनालाई जागिरको अवसर – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / JOB Profile / राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १९५ जनालाई जागिरको अवसर
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १९५ जनालाई जागिरको अवसर
ICT Khabar/आइसिटी खबर July 27, 2016	JOB Profile, आइसिटी मार्केट Leaveacomment 850 Views
विश्वभर चीनको निःशुल्क वाईफाई सेवा
काठमाडौं । पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १९५ जनालाई जागिर खुलेको छ । लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले परिक्षा लिने भएकाले पूर्णप्रतिस्पर्धाका आधारमा बैंकले नयाँ कर्मचारीको छनोट गर्नेछ । लिखित परिक्षा र अन्तवार्ताबाट उम्मेद्धवारहरुको छनोट गरिने छ ।
बैंकले महिला आवेदनका लागि ३५ वर्ष ननाघेका महिलाले आवेदन दिनसक्ने गरी विज्ञापन खुलाएको थियो । तर, ४० वर्षसम्मका महिलाले आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
कुन तहमा कति ?
बैंकले ३ तहमा ७३ जना, ५ तहमा ४१ जना, ६ तहमा ७५ जना, ७ तहमा पाँच जना र ८ तहमा एक जना कर्मचारी मागेको छ । तर, नयाँ कर्मचारीले विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रीय कार्यालय अन्तरगर्तका शाखामा काम गर्नुपर्ने छ ।
कति चाहिन्छ योग्यता ?
छैटौं तहमा आवेदन दिन व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ भने तीन तहमा आवेदन दिन १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै पाँचौ तहमा आवेदन दिन स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
तीन वर्षमा साढे ११ सय कर्मचारी थप्दै
पुराना कर्मचारीले अवकास पाएपछि नयाँ कर्मचार थप्न बैंकले ३ देखि ८ तहसम्मका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो । आगामी ३ वर्षभित्र साढे ११ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरुले अवकास पाउने छन् । अवकास पाएको कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि बैंकलाई ठूलो जनशक्ति आवश्यक परेको हो ।
Previous विश्वको सबैभन्दा ठूलो पाइरेसी वेबसाइट बन्द
Next हुवावेको वाइफाइभ II
एप्पलको पुरानो थोत्रो कम्प्युटरको लिलामीको मूल्य ३ करोड
अमेरिकामा एउटा थोत्रो कम्प्युटरको लिलामी हुँदैछ । आश्चर्यको कुरा यो कम्प्युटरको लिलामीको मूल्य ३ लाख ...